Banyere Anyị - Qingdao Heritage Food Co., Ltd.
A Professional Dehydrated Mkpụrụ Manufacturer na ekspootu
E guzobere Qingdao Heritage Food Co., Ltd. na 2014, nwere aha e debara aha nke nde yuan 30, na-ekpuchi mpaghara nke 30000 square mita na ngụkọta ego nke 500 nde yuan. Ọ bụ a arụ ọrụ Fikiere mkpụrụ osisi, diced mkpụrụ na jam mbupụ nhazi enterprise tụnyere RD, mmepụta na ahịa. O nwere isi ihe isii nwere ikike nke ụlọ ọrụ na-enyocha ngwaahịa. Companylọ ọrụ ahụ nwere mkpụrụ nke mkpụrụ 6000 tọn mkpụrụ osisi a mịrị amị kwa afọ, ụlọ ọrụ ahụ agafeela SC, HACCP, BRC, kosher, ISO22000, SMETA, UL, bulie usoro (Social Responsibility) asambodo na ntinye akwụkwọ FDA.
Ngwaahịa na-tumadi exported na United States, Japan, Europe na ndị ọzọ na mba ndị mepere emepe, na-anụ ụlọ "Baicaowei", "Qiaqia", "Miss" na ọtụtụ ndị ọzọ depụtara ụlọ ọrụ OEM ụlọ ọrụ.
Qingdao Heritage Food Co., Ltd. abụrụla ọkachamara n'ọhịa nke ịmịpụta mkpụrụ osisi dehydrated afọ 30.
Ebumnuche anyị bụ ịnye ndị ahịa anyị ngwaahịa kwesịrị ekwesị yana ọnụ ahịa ezi uche dị na ya. Ọrụ Nri Heritage bụ ndị ahịa zuru ụwa ọnụ nke ndị ahịa karịrị mba 20. Anyị na-enye akara nkeonwe na mkpụrụ osisi a mịrị amị.
Anyị na-arụ ọrụ iji belata usoro ahụ site na nzaghachi ngwa ngwa na nchegbu ọ bụla; hụ na ị nwere ike ịgwa anyị okwu nke ọma na nke ọma.
Anyị bụ ndị na emeputa na ekspootu dehydrated mkpụrụ osisi
Kedụ ihe anyị nwere ike imere gị?
Ihe oriri nketa dị na obodo Qingdao, n'ime oge elekere 1 site na ọdụ ụgbọ elu Qingdao. Na-ekpuchi mpaghara nke square mita 28,646, wuru mita 18,000 nke ebe a na-emepụta nri n'oge a. Anyị bụ ndị ọkachamara maka n'ichepụta na mbupụ mkpụrụ osisi a mịrị amị.
Anyị na-amị mmiri dị ala na shuga dị ala Mandarin Orange Dehydrated, Apple, Strawberry, Kiwi, Cantaloupe, Peach, Aprịkọt, na Obara Ọbara. Whole / Chunk / Slice / Dice.
Nweta otu ebe. Nọgide na-akpa àgwà. Ọnụahịa ezi uche dị na ya. Ezigbo ụtọ. Ọrụ ogologo ma kwụsie ike. Mee ka azịza ahịa gị dịkwuo mma ma mepụta ezigbo uru yana gị. Ihe oriri nke ihe nketa bụ usoro usoro ngwaahịa yana "ụlọ ọrụ + isi + ndị ọrụ ugbo + ahịa". Ndị ọrụ R & D anyị dị ike na-enye ihe ọhụrụ iji hụ na asọmpi na-aga n'ihu.
National High Tech ụlọ ọrụ.
Uzo ato ngosiputa "Ulo ato" nke ochichi nke nyocha nke ahia ahia.
China nri gold ika.
Ndị na-eduzi ụlọ ọrụ ịda ogbenye na mpaghara Shandong.
Key na-eduga ụlọ ọrụ nke ugbo mmepụta ihe na Shandong Province.
Shandong Province gbaara enterprise technology center.
Qingdao ime ihe n'eziokwu.
Anyị nwere ndị ọkachamara na teknụzụ abụọ si Thailand nwere ihe karịrị 30years experence. Dọkịta dibịa anyị si Taiwan karịrị afọ 70. Ndi otu anyi di nma iji meziwanye ma mepee ihe ohuru na uzo ha. Anyị na-akwụ nnukwu ọrụ na ngalaba R&D na ngalaba Production. Ezigbo mma, usoro iheomume oge, ezi mmekọrịta nke ndị ahịa anyị na ndị na-ebubata ya bụ akụ kacha mkpa maka anyị.
Anyị na-eji akụrụngwa kachasị ama ama iji hụ na ọ dị mma. Imirikiti mkpụrụ osisi anyị sitere na ngwaahịa nke Geographical Indication. Anyị dehydrated mkpụrụ osisi nwere ezi mma, ezi technology, idi ahịa ule na n'ji picky. Anyị na-eji Thailand kachasị elu iji wepụta mkpụrụ osisi oyi na China. A na-agbanye mkpụrụ osisi na mmiri sirop dị ala, hụ na acidity na Odisi pụrụ iche, na ekpomeekpo pụrụ iche.
Ngwaahịa ndị bụ: Mandarin Oran dehydrated, Apple, Strawberry, Kiwi, Cantaloupe, Peach, Aprịkọt na Ọbara Orange.Whole / Chunk / Mpekere / Dice.
Anyị nwere asambodo nke HACCP, BRC, KOSHER, FDA, SEDEX, ISO 22000 na ELEVATE.
Anyị isi Njirimara bụ Non n'ịnọgide, Clump free, Low sọlfọ, Low mmiri, Low sugar. Tọ ma gbara ụka.
Yabụ ị kwesịrị ịkpọtụrụ anyị site na iziga anyị ozi ịntanetị ma ọ bụ kpọọ anyị mgbe ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị